Frantsa : Fanavakavahana satria heverina ho mpangalatra avy hatrany · Global Voices teny Malagasy
Frantsa : Fanavakavahana satria heverina ho mpangalatra avy hatrany
Voadika ny 25 Aogositra 2010 20:14 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, македонски, Italiano, Magyar, 繁體中文, 简体中文, Français
Any amin'ny Rroms (gitanos) avy amin'i jespel tao amin'ny Flickr licence CC Attribution NC-ND 2.0 Generic
(Nosoratana tamin'ny teny frantsay avy hatrany ity lahatsoratra nosoratan'ny ekipan'ny Global Voices en Français ity.)
Navoakan'ny fantsom-baovao France 4 indray tamin'ny asabotsy 14 aogositra ny lahatsarim-panadihadiana Qui a peur des gitans ? [iza no matahotra ny gitans] notontosain'i John Paul Lepers tamin'ny 2009 , hoy ny nosoratan'i Le Post :
…lahatsarim-panadihadiana izay mety hanandanja tokoa ankehitriny ao anatin'izao savorovoro izay anosehan'ny mpanao politika ny olona mpirenireny hizaka ny hatezeram-bahoaka izao .
Maro ny fitsaratsarana ivelany efa raiki-tapisaka tao anatintsika, isika monina amin'ny faritra iray na “gadjés” hoy ry zareo mantsy antsika, hatramin'ny fahagola ny ametrahantsika azy ireo ho jiolahy sy maharikoriko fa maloto sy masiaka.
Marina tokoa fa tsy samy hafa amintsika izy ireo ary noho ny fahafahan'izy ireo dia tsy mahalala ny fitsipiky ny fiaraha-monintsika ny sasany. Fa moa ve manaja ny lalàna mikasika azy ireo ny fitondrana ? Moa ve voahaja ny lalàna Besson izay manery ny kaominina rehetra manana mponina mihoatra ny 5000 hanokana tany malalaka handraisana ny olona mpirenireny efa nihatra hatramin'ny taona 2000 ? Aiza ho aiza isika folo taona aty aoriana ? Zara raha ny 20% n'ny kaominina no mampihatra io lalàna io fa ny hafa kosa dia mandika azy tsy matahotra sazy.
Raha mbola mitorajofo ny famotehana filasiana sy ny fandroahana ny Roms nambaran'ny Filoha Nicolas Sarkozy sy ny Minisitry ny atitany Brice Hortefeux, ary heverina fa ankasitrahan'ny maro an'isa tsy miteny, nefa mbola misalasala tanteraka amin'izany fiheverana izany ny tontolo politika, eny fa na dia ny ao amin'ny antoko UMP aza, ny mpamaham-bolongana avy amin'ny vazantany samihafa ary ny hafa izay tsy nandrasana loatra hilaza ny heviny ka tsy nahatana intsony ny hatezerany.
Bienvenue chez les roms, navoakan'ny La Tribune de Genève dia milaza ho nahatsikaritra mpitendry mozika roms mitondra ny anarana hoe Sárközy tany Hongria izay nasainy hohenointsika toa maneso :
Anara-mahazatra any amin'ny Rroms any Hongria, ary dia dingana iray fotsiny sisa dia azo lazaina fa rrom ihany koa ity Sarkozy eto amintsika ity. Ny marina, nahatsikaritra mpitendry mozika iray antsoina hoe Sárközy ao amin'ny Cigánski diabli / Ny Devoly rroms aho. Ary raha anisan'izy ireo koa ilay eto amintsika ? Ilay toy ny devoly nanadino ny filatom-peony, ny rima ary ny hira, tsy misy nomeny antsika intsony afatsy ny korotam-peo makarenintsofina izay misy olana amin'ny maha-izy azy ka ny Rroms no analany vonkona.
Mody adala koa i Bah by CC :
Nahita Rroms aho tamin'ny fahitalavitra.
Tsy nahita azy ireo tahaka ny filazan'i Hortefeux azy aho.
Tsy nahita azy ireo ho manana fiara berline mitondra ny marika alemana aho.
Tsy mahita mihitsy.
Nefa moa hatramin'ny nanafangaroan'i Hortefeux ny Arabo amin'ny Auvergnats, dia efa fantatra tsara fa maivana ihany ny fomba fijeriny…Afa-tsy hoe niniana natao angaha ny fifampifangaroana ?
Fa ny Rroms hitako tamin'ny fahitalavitra aloha dia tahaka ny fadiranovana tanteraka. Ao anatin-javatra tonta sy rotidrotika izany no atoriany, any amin'ny fitobian'ny fiara nahazoany alalana hijanonany.
Ny lohahevitra mahazatra ny dernier des blogs moa dia “kisarisary, kolontsaina nomerika, science-fiction, zavakanto ankehitriny”. Saingy nanao fanadihadiana lalina tao amin'ny bolongany moa ny mpanoratra rehefa naneho ny hatezerany fa “ny any amin'ny faratampon'ny fitondrana no miala vonkina amin'ny olona mora asiana toy ny Gitans”, tao amin'ny lahatsoratra nivoaka tao amin'ny owni ary mitondra ny lohateny hoe la quinzaine du Rrom[Tapabolan'ny Rrom] :
Misy zavatra hafa ihany koa. Hitako fa nisy zavatra napongatr’ itony mponina « mpirenireny » itony, fa ry zareo no fasika mampikatso ny milina. Nefa anie maro ny fotoana ry zareo ihany no menaka nampiodina ny milina, satria matetika ny roms no mpampita ny haitao sy ny fahaiza-manao na mpiasa tanana ilaina indrindra amin'ny fotoanam-pahavokarana any an-tsaha. Na dia nekena tsy tamim-pihambahambana aza ny fisian'izy ireo taloha dia maningana amin'ny ataon'ny tontolo maoderina ny ny fomba fiainan'izy ireo. Tokony ho sarobidy amintsika izany sata ananan'izy ireo izany fa tsy ny iheverana azy ireo ho toy ny vatokely tafiditra anaty kiraro, na dia amin'ny fahafantarantsika ny momba antsika fotsiny aza (« isika » manondro ny olona «tsy mirenireny »).
Tsy haiko ny manao petrakevitra mazava, fa tahaka ny hitako mifanindran-dalana mandrakariva amin'ny ireto « mpirenireny » ireto izany ny lohahevitra mahoraka aty amintsika liana manokana ny zavakanto nomerika: ny zaratany, ny fifindrana, ny tsiaro, ny fanaraha-maso, ny fandraketana, ny fifangaroana ara-tsosialy, ny harena ara-pisainana(tsy ny fananana na zon'ny mpamorona fa ny tsiambaratelon'ny mpanakanto sy ny mpanao asa-tanana ampitaindry zareo samy zareo)… Ary amin'ireo lohahevitra ireo no ahitana ny famokarana sy ny fampiasana zavatra.
Voatery niainga avy any India hirenireny noho ny asany « maloto » nefa ilaina (mpamafa, mpanadio, mpandrafitra momba ny vy,…) mbola karazan'asa toy izany hatrany no nataon'ny rroms arivo taona aty aoriana. Fa tao anatin'ny taompolo vitsy monja, heveriko fa tsy mbola tratran'ny teritery toy izao ry zareo hanao ireo karazan'asa ireo, ary hitako fa ny fomba fifandraisana amin'ny fitaovana no anton'izany.
Nosoloin'ny fiara ny soavaly (nanana ny toerany lehibe tokoa ho an'ny toekarena gitane). Tsy fanao intsony ny mandranitra antsy na manesika mololo ny ondana mbamin'ny seza, tsy fanao intsony ny manamboatra, ariana daholo ny fitaovana satria efa natao ho fanary ankehitriny ny vokatra, fa ny mivarotra misesisesy no hahazoan'ny orinasa tombony kokoa (na dia mora kokoa aza ny vidiny) raha mivarotra zavatra in-dimy ao anatin'ny folo taona noho ny mivarotra zavatra iray maharitra roapolo taona izay namboarina raha tsy maintsy nisy ny fanamboarana. Ny olana amin'ny rroms, angamba ny resaka haitsena [marketing] sy ny haibika [design].
Nanao fanangonan-tsonia ny tao amin'ny vohikalan-tserasera La voix des Rroms nanomboka ny 4 ogositra teo mitaky ny fampitoviana ny fikarakarana ny Rroms sy ny “mpirenireny”, izany hoe ankoatra ny Rroms, [dia] ny Gitans sy ny Manouches amin'ny vahoaka frantsay amin'ny ankapobeny.
Mandritra izany fotoana izany dia mampisy fandraisana samihafa ihany koa ny momba ny firenena niavian'ny Roms tsy mizaka ny zom-pirenena frantsay, fa an'ny Vondrona Eoropeana.
Roumanie, mahita ny mety ho “fibolisaran'ny kabary mandambolambo ny olona sy ny fihetsika mankahala vahiny aterany” vokatry ny famerenana ho ao anatin'ny sisintaniny ny olony no nanomboka ny resaka diplaomatika amin'ity raharaha ity.
Akaikinn'ny kianja indrindra i Laurentiu Mihu sy i George Lacatus no manazava ao amin'ny bolongana robin-woodard, :
Koa satria moa mihazakazaka andro vitsivitsy izao ny fandravana ny toby filasian'ny rroms eto Frantsa dia tsy misalasala ny manara-maso izay mpanjifa hita ho manana fiaviana tsigane mitety talatalana ny tranombarotra vaventy… Na ny tena loza, misy ny mandrara tsotra izany ny fidiran'izy ireny ao am-pivarotana. Voamarin'ny gazety mpivoaka isan'andro România libera izany tany Rouen sy tany La Rochelle.
Elena B., Roumaine manana fiaviana rrom, monina sy miasa any Rouen ohatra no mitantara: « taloha tena nalalaka. Ankehitriny, raha vao miditra ny fivarotana ianao ka hitany fa Rrom avy any Roumanie dia arahiny any amin'izay alehanao rehetra ianao, mandra-pivoakanao ny fivarotana. Tsy misy azo angalarina intsony. »
Nomeny rariny ihany anefa ny Frantsay : « Tamin'ny voalohany ny Rroms avy any aminay dia mangalatra ny hohanina fotsiny ka tsy miteny ny Frantsay. Avy eo moa nisy ny nanao tafahoatra fa misy ny mangalatra mba hivarotra izay azony. Ankoatra ny sakafo dia misy ny mangalatra vokatra lafo. Ankehitriny na dia ny manandrana sakafo ireo vokatra amidy mora aza tsy tsy azon'ny Rroms atao. »
Nefa kosa toa tsy mba miraharaha izay manjò ny olona avy any aminy akory i Bulgarie araka ny tarainan'ny Courrier des Balkans :
Oviana moa ny Boligara no mandre am-pifaliana ny olana noho ny Rroms ? Rehefa miteraka olana any amin'ny firenena ivelany any irery ihany ny solontena boligara amin'ireny olona vitsy an'isa kokoa ireny.
Vantany vao re izany dia mipingapinga avy hatrany ny tia tanindrazana avy amin'ny saranga antonony izay mahita fa manana olana i Bulgarie noho ny zioga ottoman sy ny hafetsifetsena kalin'ny Rroms miteny hoe : « Ah, ho hitan'ireo Eoropeana tsara izany atao hoe Rroms izany, fa tsy maintsy hitsaha-ketrika kely amin'ny resaka zon'olombelona sy izay zavatra hafa tsy fantatro loatra izao ry zareo »… Ny olana tsy tsy mba hafa fitondra-tena kokoa amin'ny « tia tanindrazana kely irony » ny fitondram-panjakana Boligara.
Moa ve vahaolana hafa ny fametrahana « villages d’insertion » [tanànam-pandraisana] ? Nanadihady ny amin'izay lazaina fa “paradisan'ny Rroms” ny Café Babel tamin'ny volana jolay teo ka niresaka ihany ny tsy faharesen-dahatra loatra momba io avy amin'ny ankolafy rehetra, ka namehy hoe:
Izany no tsy mahasasatra ny fikambanana eoropeana miaro ny minorités hoe mila heverina ny anjara toerana misy ny Rroms. efa indroa anefa izao ny mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana no niresaka momba ity lohahevitra ity nandritra ny vovonana roa niresahana ny momba ny fampidirana ho ao anaty fiaraha-monina [l’intégration de la communauté]. Nefa tsy nanao na inona na inona. « Miharatsy hatrany hatrany. Resahin'ny rehetra ny momba ny Rroms ao amin'ny Antenimiera. Hita ho mifantoka ry zareo. Fa tsy nisy mihitsy ny fanapahan-kevitra noraisina. Tsy maintsy mampiditra lalàna manokana vaovao amin'ny anjara toeran'ny Rroms ny Teti-panorona Vondrona Eoropeana 2020. Nefa, tsorina, maika dia maika izany. »
Mandry tsirangaranga mandrakariva ny Rroms eo anatrehan'ny revirevy politika sy ny hamafin'ny zava-misy ara-tsosialy iainany. Ary araka ny naboraky ny solontenan'izy ireo dia mety mbola haharitra folo taona io toe-draharaha tsy mampitombina io.
Italia angamba no nanondro ny lalana, lavitry ny fijery mankahala vahiny. Café Babel, izy hatrany, no nijery izany akaiky :
Ahoana ny ataon'ny Italiana amin'ny « villages d’insertion » [tanànam-pandraisana] vita avy any Frantsa? Tsy misy. Nefa misy ihany ny zavatra miova. Raisina voalohany amin'izany ny nataon'ny Ben'ny tanànan'i Roma, Gianni Alemanno, voalohany naka Rrom ho ao antin'ny ekipa monisipaliny, hatramin'ny kaominin'i Treviglio, Faritra avaratry ny firenena, tondroina ho modely eoropeana momba ny fandraisana vahiny.
Hajia : Sary jespel ao amin'ny Flickr licence CC Attribution NC-ND 2.0 Generic
Tantaran'ny Bolgaria farany
12 Avrily 2021Eoropa Afovoany & Atsinanana
28 Oktobra 2020Eoropa Afovoany & Atsinanana
14 Oktobra 2020Amerika Avaratra